munyori: Yulia Egudin
musha > Yulia Egudin
Nguva yekuverenga: 4 maminitsi The kuwedzera kuitika kune ari kupfuura zvakatipoteredza-ushamwari akaita akakonzerwa dzakawanda, uye dzaisiyana mitema matanho munyika yose, mumaguta makuru nemisha maduku zvakafanana. Chimwe chezviratidzo zvakawanda cheichi kuwedzera kushandiswa kwesimba rinowedzerwazve muhupenyu hwevanhu hwezuva nezuva uye kushanda munzvimbo dzacho…
Nguva yekuverenga: 3 maminitsi Chakarebesa chitima nzendo munyika dziri refu chaizvo! nzendo izvi zvinogona kutora mazuva anoverengeka uye kufukidza zviuru zvemakiromita. saka, heano nzendo kuti kutora wakarebesa mu Europe, Asia, Ositireriya, uye US. Ichi chinyorwa chakanyorerwa kudzidzisa nezve…